Yakachena Sesame Oiri 160ml
Sesame mafuta chinhu chine simba chinodzosera kumashure zviuru zvemakore uye chinozivikanwa nekugona kwayo kusimudzira kunaka uye hutano mabhenefiti einenge chero dhishi. Kunze kwekupa hupfumi hweantioxidants uye mafuta ane moyo unovaka, ichi chinhu chinovaka muviri chakaratidzirwawo kutsigira hutano hweganda, kusimudzira hutano hwemwoyo, kudzora kuzvimba uye kubvisa marwadzo asingaperi. Iyo zvakare yakapfuma mumavitamini uye yakakosha yekuteedzera zvinhu simbi, zinc uye mhangura, uye ayo cholesterol yemukati yakaderera kwazvo kupfuura mafuta emhuka. Iyo sesame mafuta ine imwe yekurapa kukosha, iyo inogona kunonoka kukwegura, kuchengetedza tsinga dzeropa, kunyorovera ura uye kuita tsvina, kuderedza huturu hwefodya nedoro, uye kuchengetedza chiropa.
Tsanangudzo: 160ml * 12 mabhodhoro / CTNs
Pasherufu hupenyu: 18 Mwedzi
Kuchengetedza: Nzvimbo inotonhorera uye yakaoma, nzvenga zuva rakananga.
Zvitifiketi: HACCP, ISO9001: 2008
1. Hutano uye hwakachena sesame muto, Hapana chinowedzera
2. Sesame oiri ine yakakosha isaturated fatty acids uye amino acids, inotanga kutanga pakati pemarudzi ese emafuta emiriwo.
Zano Roushamwari: Ndezvechisikirwo chiitiko kuti chigadzirwa chinosimbisa kana kuchitonhora kana kuchinamira mujecha zvishoma nezvishoma kubva pasi kusvika kumusoro.
1.Miriwo inotonhorera / Saladi
3.Sunga miriwo yakakangwa
Pashure: Rose Vhiniga
Zvadaro: Kudya kwemangwanani Biscuits
Asia Sesame Oiri
Chinese Sesame Oiri
Yakapetwa Yakadzvanywa Sesame Oiri
Yakachena Sesame Oiri
Yakanatswa Sesame Mbeu Mafuta
Sesame Oiri Mune Bulk
Sesamum Indicum Oiri
Yakavhenganiswa Sesame Tahini
Hawthorn Strip, Vana Mabhisikiti, Mutsva Bean Curd Stick, Kudya Nzungu Dzakarungwa, Ladyfinger Cookie, Soy Sauce Mapaketi,